राजपामा पूर्वका नेता हावी भए (अन्तर्वार्ता) | London Nepal News
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल गठन भएको झण्डै तीन महिना पुग्न लागेको छ, तर त्यसभित्र रहेका विवादहरु व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन । पार्टीको गठन प्रकृयादेखि लिएर विधान, घोषणापत्र तथा कार्यसमितिलगायत माथि विभिन्न आरोपहरु लाग्न थालेपछि पार्टी आन्तरिक रुपमा विवादीत बनेको छ । छ जनाको अध्यक्ष मण्डल रहने गरी ८१५ जनाको कार्यसमिति बनाइए पनि तर त्यसमा पनि धेरैले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
भेलामा राजपा नेपालमा असन्तुष्टहरुको जमघट थियो । के भयो भेलामा ? के छ असन्तुष्टि ? यसकालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ लगायतका विषयमा राजपा नेपालका महासचिव वृजेश गुप्ता जो भेलामा सहभागि थिए । लण्डननेपालले उनीसँग गरेको छोटो कुराकानीः
– असन्तुष्ट पक्ष त नभनौ तर हामी पश्चिमका नेताहरु आपसमा छलफलका गर्नका लागि बसेका थियौं । यसअघि पाँच नम्बर प्रदेशमा सम्पन्न भएको चुनाव र असोज २ गते हुन गइरहेको चुनावको बारेमा छलफल गर्नका लागि बसेका थियौं ।
Previous : कवि पोख्रेल सुप्रमा पुरस्कारबाट सम्मानित
Next : ११ वर्षे बालिका गर्भवती भएपछि गाउँ निकाला